Xildhibaanad Soomaaliyeed oo Casuumad u fidisay Madaxweyne Donald Trump - iftineducation.com
iftineducation.com – Gabadhii ugu horeesay ee Soomaaliyeed ee Xildhibaan ka noqota Aqalka Wakiiladda ee Minnesota dalka Mareykanka Ilhan Cumar ayaa casuumad u fidisay Madaxweynaha cusub ee dalka Mareykanka Donald Trump.
Ilhaan Cumar ayaa Madaxweynaha cusub ee dalka Mareykanka Donald Trump ku casuuntay in hal maalin ay wada qaataan si ay uga wada hadlaan arimo badan oo xasaasi ah oo ku aadan xaalado taagan.
Xildhibaano katirsan Gobalka Minnesota , Garyaqaano , saraakiisha gobolka ayaa dhigay banaan bax ay uga soo horjeedeen wax ka badalka uu doonayo Madaxweynaha cusub in uu ku sameeyo dhinaca socdaalka .
Ilhaan Cumar ayaa sidoo kale sheegtay in go’aanka Madaxweynaha cusub ku doonayo in gacan bir ah ku qabto dalka Mareykanka ay ka dhigayso dalkaasi mid cadaawadeed iyo inuu noqdo mid ka mid ah Hoggaanka keli-talismimo.
Soomaalida kunool dalka Mareykanka ayaa walaac xoogan ka muujiyay wax ka badalka uu Madaxweynaha cusub doonayo in uu ku sameeyo socdaalka gaar ahaan qorshaha uu ku doonayo in lagu hakiyo qaxootiga cusub ee dib-u-dejinta ka helay dalka Maraykanka.
Madaxweyne Donald Trump ayaa shaaca ka qaaday in la hakin doono mudo sedex bilood ah qaxootiga cusub ee imaanaya dalka Mareykanka si ay dib u eegis ugu sameeyaan qaabilaada qaxootiga.